Ndeapi Mhando dzeWave?
ne admin pane 20-10-24
Iyo Plain Weave ndiyo inowanzo shandiswa uye yakapusa waya machira kuruka. Tambo yega yega yewokuruka (waya inomhanya-yakafanana nehurefu hwejira) inopfuura neimwe uye pasi pewaya ichimhanya zvakashata kuburikidza nemucheka (zadza kana kupfura waya) pamakona makumi mapfumbamwe. Iyo ine yakakura kwazvo zvakasiyana siyana yekushandisa ...
Wire Mesh Kukanganisa?
1.Machira ekupeta: Mavara emutsara pawaya yepasi pevhu asingakwanise kudzimwa. 2. Makomba Akaputswa: Zvimedu-zvidimbu zvakaputsika waya panzvimbo imwechete kuita gomba pamusoro. 3. Rusty Spots: Makara akachinjwa ne ngura. Ruvara mavara munzvimbo. 4. Yakavhunika waya: Yakatsemurwa netambo imwe chete. 5. Wire Kudzoka: ...
Maitiro Ekuyera Wire Mucheka?
A: Space Cloth inoratidza iyo yakavhurika nzvimbo pakati peyakafanana waya. B: Mesh Kuverenga kwakazivikanwa senhamba yekuvhurika neyakaenzana inch. Mesh kuverenga kunogona kuratidzwa seyese nhamba izere, chidimbu, kana seiri maviri manhamba kunze kwekunge iwo machira ari akakosha machira anonzi space jira - yega ...